EGİAD Covid 19 Shaxda Qalalaasaha ayaa la Aasaasay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirEGİAD Covid wuxuu aasaasay 19 Shaxda Qalalaasaha
25 / 03 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, TURKEY
egiad covid wuxuu dejiyey miiska dhibaatada
In kasta oo wasaaradaha, dawladaha hoose iyo xisbiyada siyaasadeed ee laxiriira cudurka faafa ee coronavirus, oo wax yeeleeyey dunida kuna dilay kumanaan qof, ay halkoodii kasii wadaan ayadoon hoos u dhicin, hal talaabo ayaa ka yimid EGİAD. Adduunka oo dhan sarkhaansan bannaan iyo EGIAD Aegean la xiriira si degdeg ah oo fidsan laakiinse dillaacay fayruska Corona ee Turkey Young Business Association Dadka mar kale u saxiixay siyaasad, waxay u baahan karaan xubnaha ku abuuray miiska dhibaato nooc kasta oo taageero ah. Miiska qalalaasaha ee EGIAD, oo ka kooban Xubnaha Guddiga iyo shaqaalaha, wuxuu u shaqeyn doonaa sidii koox hagitaan iyo hagitaan ah oo ku saabsan geedi socodka dhaqan-dhaqaale ee xubnaheeda ay u baahan karaan marka loo eego Covid 19. Miiska qalalaasaha ee xaaladdan ku jira ayaa u shaqeyn doona sida miiska dhibaatada ugu horreeya oo ay aasaasay NGO-gu.
Sida ku xusan qoraalka qoran ee ay sameysay EGİAD, faahfaahinta miiska dhibaatada ayaa si faahfaahsan loo bixiyay. Qoraalka qoraalka ah ee loo diray Xubnaha EGİAD meesha ugu horeysa ka dibna saxaafadda lala wadaago, qiimeynta soo socota ayaa la sameeyay: “Marka laga hadlayo dhacdadan naxdinta leh halkaas oo boqolaal kun oo dad ah ay ku bukoona kumanaan kun oo qof oo adduunka ku nool, waxaan aragnaa in dhammaan qaababka nolosha casriga ah ay yihiin kuwo aan caawin lahayn. Waa xaqiiqo dhab ah inaan arki doonno saameynta bulshada iyo dhaqaalaha dhamaadka aafadan. Waxaan si murugo leh u daawaneynaa xaqiiqda ah in faafitaanka Covid-19 uu ku dhici karo qof kasta oo bini aadam ah, iyadoo aan la sameyn kala-sooc dhaqan-dhaqaale, taasoo horseeday walaac aad u weyn in dhammaan bulshada casriga ah aysan soo bandhigin musiibo soo waajahday dhulal aad u yar oo horumaray muddo sannado ah.
DHAMMAAN kullamada waxaa lagu sixi doonaa LUUQADAHA AQOONSIGA EE DIGITAL
Isagoo carrabka ku adkeeyay in caafimaadka aadanaha uu ka muhiimsan yahay wax kasta, Aslan wuxuu carrabka ku adkeeyay inay taxadarkooda ka qaataan urur ahaan marka loo eego horumarada ugu dambeeyay; Waxaan si xasaasi ah uga dheehnay arintan waxaanan joojiney howlihii jir ahaaneed ee ururkeena labo usbuuc ka hor waxaan u ogolaanay shaqaalaheena maamulka inay guriga ka shaqeeyaan. Jihadaan, waxaan gaarnay mid kale marka hore, xitaa haddii ay qasab tahay. ” Aslan, isagoo xusay in kulammada oo dhan loo qaado madal dijital ah isla markaana la qabtay shirkii ugu horreeyay ee guddiga agaasimayaasha oo lala yeesho fiidnimo Isniinta, isagoo xusay in dhammaan kulammada macluumaadka loo qaban doono xubnaha illaa dhammaadka geeddi-socodka adag ee lagu qaban doono isla nidaamkan, “Waxaan u qaadnay dhammaan shirarka ururrada warbaahinta warbaahinta dijitaalka ah. . Waxaan qaban doonaa kulanka guddiga koowaad ee dhijitaalka ah usbuuca soo socda. Waxaan qaban doonnaa seminarkeena dijitaalka ah ee ugu horreeya bisha Abriil. Waxaan fulinay hawsheena ugu horeeysay anagoo ku wareejineyna kulamadeena iyo ururadeena warbaahinta dijitaalka ah iyo anagoo siineyna shaqaalahayaga fursad ay kushaqeeyaan meel fog. Sidan, hadafkeenu waa inaan ilaalino caafimaadka xubnaha ururkeena iyo shaqaalaha. ”
AAD U BAAHAN TAHAY IN LAGUU AQOONSANO
Isagoo ku nuuxnuuxsadey inay si dhaw ula socdaan halista suurta galka ah ee ganacsiga, ganacsiga iyo dhaqaalaha ee xubnahooda ay la kulmi doonaan iyo inay abuureen miis xiisadeed marka loo eego howlaha taageerada, EGİAD Madaxweynaha Aslan wuxuu yiri, “Waan ka warqabnaa waajibaadka iyo waajibaadka saaran xubnaheena. Ilaa maanta, wuxuu u magacaabay EGİAD Board Agaasimeyaal iyo Shaqaalaha Maamulka "EGIAD CRISIS" si looga gudbo khatarta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee ay dhici karto inay ka dhaceyso xasillooni darridaas, halis caafimaad oo sarreysa iyo cawaaqibta xubnahayaga, in lala joogo, iyo in la taageero dhammaan dhinacyada ay khusayso, gaar ahaan waaxda caafimaadka, howshan awgeed. Annagu waxaannu nahay. Marka ugu horreysa, waajibaadka xiga ee xubnaha guddigeyga iyo shaqaalaha maamulka waa inay xubnaheenna ku jiraan hawshan. Maalmahan adag, marka si wada jir ah aan iskugu imaan karno jir ahaan, waa inaanu dhaqdhaqaaqnaa ilaa dhamaadka dhamaadka kala go'naanshaha jirkeena. Kaliya markaa waxaan uga tagi karnaa maalmahan adag adoo leh waxyeelo yar, anagoo kordhinayna feejignaan. Iyada oo shuruud looga dhigay waajibaadka mudnaanta mudan, waxaan shaqsiyan ku dhex jirnaa miiska dhibaatadan anaga oo ah gudiga agaasimayaasha, adoo raacinaya oraahda "Tabarucid kuma shaqeyso qalbigaaga".
XIDHIIDHKA XUQUUQDA EGIAD CRISIS TABLE
Si aad u raacdo gobolka iyo taageerooyinka dhaqaale ee si joogto ah loo cusboonaysiiyo xiisadda darteed,
U ololaynta nashaadaadyada dhiirrigelinta iyo taageerooyinka si loo yareeyo khasaaraha waaxda ee dhibaatada iyadoo lagu saleynayo jawaab celinta xubnahayaga,
In la keeno dhibaatooyinka xubnaheena iyadoo la adeegsanayo shuruudo shaqsiyeed ajendaha,
Abaabulka ololayaasha gargaarka si loo taageero daneeyayaasha dibedda
Dhamaadka hanaankan, isku dayo la abuuro xubin iyo daneeye dibadeed oo kordhisay ka warqabka ugu badan ee suuragalka ah,
Saddex mashaariic waaweyn oo miiska saaran ee Kadir Topbas
Ogeysiis Qandaraasle ah: Dib-u-hagaajinta miiska maxalliga ah
TCDD maareynta kambaska maxalliga ah oo cusbooneysiin ah
Shaxda Dukumiintiga Wareegga Ka Dhagaxda Miinada
Carnations on miiska farsamada TCDD
Demiryol-İş, Izmir Metro Inc. marka la eego miiska gorgortanka
Dhibaatada ka sii dartay, weerarka IZBAN wuu dhamaaday
Ankara Metro oo Dhibaato Ku Dhuftay
Shaxda Mushkiladda 'Covid 19'